रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - चलहरूट्याब
चल सेट गर्नुहोस्
तपाईँंको कागजात भित्र एउटा DDE लिङ्क घुसाउछ,जसलाई तपाईँंले मानाङ्कित नाम बाट जति छिटो छिटो पनि अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ।
स्थिर सङ्ख्या घुसाउनुहोस्, वा सूत्रको परिणाम.
चल वा प्रयोगकर्ता फाँटका लागि नयाँ मान घुसाउनुहोस्.
आगत फाँटमा चलको मान फाँट घुसाईएको ठाउँ र त्यो भन्दा अगाडि देखी मात्र वैध हुन्छ। पछि कागजातमा चलको मान परिवर्तन गर्नलाई, उही नामको तर फरक मान संगको अर्को आगत फाँट घुसाउनुहोस्। यधपी, प्रयोगकर्ता फाँटको मान विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तन गरिन्छ।
पृष्ठ चल सेट गर्नुहोस्
कागजात भित्र एउटा सन्दर्भ बिन्दु घुसाउछ, जसपछि पृष्ठ गन्ति सुरु हुन्छ। सन्दर्भ बिन्दु सक्षम पार्नलाई "on" चयन गर्नुहोस् र यसलाई असक्षम पार्नलाई "off" चयन गर्नुहोस्।
यस फाँटमा सन्दर्भ बिन्दुबाट "Set page variable" पृष्ठहरूको सङ्ख्या प्रदर्शन गर्नुहोस्.
एउटा अनुकूल विश्वव्यापी चल घुसाउछ। तपाईँंले शर्त कथनका लागि एउटा चल परिभाषित गर्नलाई प्रयोगकर्ता फाँट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँंले जब एउटा प्रयोगकर्ता फाँट प्रयोग गर्नुहुन्छ, कागजातमा भएका चलको सबै दृष्टान्तहरू अद्यावधिक हुन्छन।
हालको कागजातमा प्रयोगकर्ता-परिभाषित फाँटहरू मात्र उपलब्ध हुन्छ.
ढाँचा सूचीमा, यदि मान पाठ वा सङ्ख्याको रूपमा घुसाईएमा परिभाषित गर्नुहोस्।
एउटा HTML कागजात भित्र,"Set variable" फाँट प्रकार: HTML_ON र HTML_OFF का लागि दुई अतिरिक्त फाँटहरू उपलब्ध हुन्छन। तपाईँंले चयन गरेको विकल्पमा निर्भर गरेर फाइल एउटा HTML कागजातको रूपमा वचत गरेको बेलामा तपाईँंले मान बाकसमा टाइप गरेको पाठ एउटा खुल्दै गरेको HTML ट्याग (<Value>) वा बन्द हुदै गरेको HTML (</Value>) ट्यागमा रूपान्तरण हुन्छ ।
DDE आदेशका लागि साधारण वाक्यसंरचना भनेको: "<Server> <Topic> <Item>", जहाँ डेटा समावेश गरेको अनुप्रयोगका लागि सर्भर DDE नाम हो. शीर्षकले वस्तुको स्थान दर्साउँदछ (साधारणतय फाइल नाम), र वस्तुले वास्तविक वस्तु दर्साउँदछ.
तपाईँंले पाठभित्र प्रदर्शन गर्न चाहेको पाठ टाइप गर्नुहोस्। यदि तपाईँंले एउटा प्लेसहोल्डर फाँट घुसाउदै हुनुहुन्छ भने,फाँटमा माउस सूचक राखेको वेलामा तपाईँंले प्रदर्शन गर्न चाहेको पाठ मद्दत टिपको रूपमा टाइप गर्नुहोस् ।
पृष्ठ सङ्ख्या फाँटका लागि तपाईँंले लागू गर्न चाहनु भएको अफसेट मान प्रविष्ट गराउनुहोस्, उदाहरणका लागि "+1".
रिसेटिङ अनुच्छेद सङ्ख्याहरूका लागि विकल्प सेट गर्नुहोस्.
शीर्षक वा अध्याय स्तर रोज्नुहोस् गर्नुहोस् जहाँ कागजातमा क्रमाङ्कन फेरि सुरु गर्नका लागि.
क्यारेक्टर टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँं बिभाजक शीर्षक वा अध्याय स्तरहरू बीच प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.